ESI EWEPỤ IPHONE SITE NA IPHONE - IOS - 2019
Ndị ọrụ na-arụnye ụdị egwu ma ọ bụ ụda dị iche iche iji gbanye mgbanaka ha. Olu ụda a na-agbanyere na iPhone dị mfe ihichapụ ma ọ bụ gbanwee na ndị ọzọ site na ụfọdụ mmemme na kọmputa gị.
Naanị kọmputa na ngwanrọ dị ka iTunes na iTools na-enye gị ohere wepu ụdaolu site na listi ndị dịnụ. N'ihe banyere ụdaolu ụdaolu, ndị ọzọ nwere ike dochie ha.
Otu esi tinye ụda na iTunes
Esi arụnye ụda olu na iPhone
Nhọrọ 1: iTunes
Iji usoro ihe omume a, ọ dị mfe ijikwa faịlụ ebudatara na iPhone. iTunes bụ n'efu na asụsụ Russian. Iji wepu egwu ahụ, onye ọrụ ahụ chọrọ ọkụ ọkụ / USB iji jikọọ na PC.
Hụkwa: Otu esi eji iTunes
Jikọọ iPhone na kọmputa gị ma mepee iTunes.
Pịa na akara ngosi nke iPhone ejikọrọ.
Na ngalaba "Nyocha" chọta ihe "Nhọrọ". N'ebe a, ọ dị mkpa itinye akọrọ na-abụghị "Were aka na vidiyo na aka". Pịa "Mmekọrịta" iji zọpụta ntọala.
Ugbu a gawa ngalaba "Ụda"ebe ụdaolu niile edobere na iPhone a ga-egosipụta. Right pịa ụdaolu ịchọrọ ihichapụ. Na menu na-emepe, pịa "Wepụ na ọbá akwụkwọ". Mgbe ahụ kwado nhọrọ gị site na ịpị "Mmekọrịta".
Ọ bụrụ na ị nweghị ike iwepu ụdaolu site na iTunes, mgbe ahụ, o yikarịrị ka ị na-etinye ụda egwu ahụ site na ngwa ngwa nke atọ. Dịka ọmụmaatụ, iTools ma ọ bụ iFunBox. N'okwu a, mee ka mwepụ na mmemme ndị a.
Nhọrọ 2: Ndị isi
NDools - ụdị usoro ihe omume nke iTunes, gụnyere ọrụ niile kachasị mkpa. Tinyere ike ibudata ma wụnye ụdaolu maka iPhone. Ọ na-agbanwee usoro nhazi nke ngwaọrụ akwadoro.
Esi agbanwe asụsụ n'asụsụ iTools
Jikọọ smartphone gị na kọmputa gị, ibudata na open iTools.
Gaa na ngalaba "Egwú" - "Egwú" na menu na ekpe.
Lelee igbe dị n'akụkụ ụdaolu ịchọrọ ịhapụ, wee pịa "Hichapụ".
Kwenye nhichapụ site na ịpị "OK".
NDools anaghị ahụ iPhone: isi ihe kpatara nsogbu ahụ
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ụda dị na iPhone apụla
Enwere ike iwepu ụdaolu nke edere na iPhone ahụ na ụzọ ọ bụla site na iTunes ma ọ bụ iTools. Iji mee nke a, a ga-etinye ekwentị ahụ mkpọrọ, ya bụ, hacked. Anyị na-adụ ọdụ ka ị ghara ịmalite usoro a - ọ dị mfe ịgbanwe ụdaolu site na iji mmemme na PC, ma ọ bụ ịzụta egwu si Ụlọ Ahịa. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịgbanwuo ọnọdụ ịgbachi nkịtị. Mgbe ị na-akpọ, onye ọrụ ahụ ga-anụ naanị ntụrụndụ ahụ. A na-eme nke a site na ịtọọ mgba ọkụ pụrụ iche na ọnọdụ a kapịrị ọnụ.
Enwere ike ịhazi ọnọdụ nkwụsị. Dịka ọmụmaatụ, mee ka mma jijiji mgbe ị na-akpọ.
Meghee "Ntọala" Iphone
Gaa na ngalaba "Ụda".
Na paragraf "Ụda jijiji" họta ntọala ndị kwesịrị ekwesị maka gị.
Hụkwa: Otu esi gbanye ọkụ mgbe ị na-akpọ iPhone
Hichapụ ụdaolu sitere na iPhone ka enyere naanị site na kọmputa na ụfọdụ ngwanrọ. Ịnweghi ike iwepu ụdaolu ndị na-emebu na ekwentị gị, naanị ị nwere ike ịgbanwe ha maka ndị ọzọ.